Xiaomi ga-aga n'ihu na-ereghị ngwaahịa ya na United States ma ọ bụ Europe | Gam akporosis
Xiaomi ga-aga n'ihu n’ereghị ngwaahịa ya na United States ma ọ bụ Europe
Otu n'ime ụlọ ọrụ ama ama kachasị mma taa bụ Xiaomi. A na-ejikọkarị ekwentị ha na njiri mara mma na mma, ma nwee ọnụ ahịa dị ukwuu, agbanyeghị, ọbụlagodi taa ọ ka siri ike inweta ha maka ọtụtụ ndị ọrụ.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ na n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya Xiaomi agbasawanye ọnụnọ ya ruo ahịa iri atọ, na United States na Europe ọ ga-ekwe omume ịnweta ngwaahịa ya site na ndị na-ebubata ya. Dịka nkwupụta Wang Xiang, onye isi osote onye isi ụlọ ọrụ ahụ kwuru, na a Ajụjụ ọnụ nyere Engadget, ọ dị ka nke ahụ Xiaomi erubeghị njikere ire smartphones ya na United States.
Dika Wang Xiang kwuputara na okwu ya na Engadget, n'agbanyeghi aro nke Hugo Barra (onye oru ya nke o kwusiri mgbe o si na ulo oru ya puta) banyere ike nke Xiaomi smartphones na United States n'oge na 2017, gini ka i bu na-achọ Xiaomi "na-eje ozi n'ahịa ndị mepere emepe" n'ihi na ihe kacha ya mkpa abụghị inweta ọnọdụ na ahịa adịchaghị, kama ọ bụ "anyị na-achọ nnukwu ahịa [...] na anyị chọrọ ọhụụ maka onye ọ bụla."
N'aka nke ọzọ, okwu banyere ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ekwentị dịkwa mkpa, onye ike ya na mba dịka Amerịka na-ekpebi. N'ezie, ụfọdụ ụlọ ọrụ dịka OnePlus ejiriwo ihere banye n'ahịa US site n'ire ndị ahịa ozugbo. Maka Wang, nke a abụghị nhọrọ amamihe n'ihi na nwere ike imebi mmekọrịta Xiaomi na ụlọ ọrụ US, ihe nwere ike ịdị ezigbo mkpa ma emechaa.
Yabụ, ọ dị ka ọ bụrụ na anyị chọrọ ama Xiaomi ama na United States ma ọ bụ na Europe, anyị ga-aga n'ihu na-eme njem ruo ugbu a n'ụzọ na-abụghị nke gọọmentịl sitere na ndị na-ebubata ngwaahịa bụ ndị, n'agbanyeghị, na-aghọ akwa dị mkpa n'ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Xiaomi ga-aga n'ihu n’ereghị ngwaahịa ya na United States ma ọ bụ Europe
Nwa nwanne m nwoke David gwara m okwu banyere Xiaomi dị ka ezigbo ọzọ maka ekwentị mkpanaaka. M gere ya ntị ma nye nwunye m Xiaomi Redmi Rịba ama 3 Pro na m bụ kpamkpam ziri ezi ... N'ihi na ihe karịrị € 200 anyị were a mobile na magburu onwe arụmọrụ. Ugbu a enwere m Huawei ma mgbe m gbanwere ekwentị m ọ ga-abụ maka Xiaomi n'ezie. N'okwu m, akpọtụrụ m onye na-ebu ngwaahịa na ebay nke kpọtara ha na China, na nkwa zuru oke. Ma enweela otutu ụlọ ahịa (Madrid) ebe ị nwere ike nweta ha na ọnụahịa dị mma.
Chrome 58 maka gam akporo na-eweta mmelite na nbudata na akụkọ ihe nchọgharị